‘भ्रुणमा नै मुटुको समस्या पत्ता लगाउने प्रविधिको पर्याप्त प्रचार भएन’ : डा. आवेश कोइराला — donnews.com
नेपालमा फेटल इको कार्डियोग्राफी सेवा भित्रिएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि नेपालमा यो प्रविधिबारे धेरै प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। भ्रुणको मुटुको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिने यो एक प्रकारको अल्ट्रा साउन्ड हो। यसबारे कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिष्ट डा. आवेश कोइरालासँग गरिएको कुराकानी।
गर्भवतीले एक पटक गरे पुग्छ। तर, कहिलेकाँही भ्रुण घोप्टो परेर बसेको अवस्थामा वा अन्य जटिल समस्या हुँदा एक पटकभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। सन् २०१६मा बासँबारीस्थित गंगालाल अस्पतालले २५१ जना गर्भवतीमा अनुसन्धान गर्दा १५ प्रतिशतको भ्रुणमा मुटुको केही न केही समस्या देखिएको थियो। हुन त धेरै जस्तो विकसित देशमा अस्पतालले गर्भवतीलाई अनिवार्य चेक जाँच गराएका हुन्छन्। तर, हाम्रो देशमा यो विषयबारे धेरै अस्पतालमा प्रचार प्रसार नै भएको छैन। जसले गर्दा शिशु जन्मिसकेपछि विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ। यदि भ्रुणकै अवस्थामा कुनै गम्भीर समस्या देखिए सुत्केरी गराउनुअघि पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ। अझ गर्भमा नै भ्रुणको उपचारसमेत गर्न सकिन्छ। -स्वास्थ्य खबर